Otu esi wụnye & hazie Apache (httpd) na Let's Encrypt TLS/SSL na AlmaLinux 8 - LinuxCapable
Wụnye Apache (HTTPD)
Hazie Iwu Firewall
Nyochaa sava weebụ Apache
Mepụta ma ọ bụ hazie ndị ọbịa mebere maka Apache
Mepụta ma ọ bụ hazie akwụkwọ ndekọ aha
Mepụta onye ọbịa mebere
Kwado onye nnabata mebere
Chekwaa Apache na ka anyị zoo SSL Asambodo efu
Ijikwa ọrụ Apache
Ndekọ nkesa Apache
Otu esi ewepu (wepụ) Apache
Apache, bụkwa nke a maara dị ka Ihe nkesa HTTP Apache, bụ otu n'ime ngwa sava weebụ a na-ejikarị eme ihe n'ụwa niile n'ime iri afọ ole na ole gara aga. Ọ bụ ngwa webụ ngwa na-emeghe ma na-emeghe nke ndị na-echekwa ya Apache Software Foundation. Apache na-enye ụfọdụ atụmatụ dị ike nke nwere modul na-ebufe ngwa ngwa, njikọta dị mfe na ngwanrọ ndị ọzọ, yana njikwa faịlụ static, n'etiti atụmatụ ndị ọzọ ewu ewu.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye Apache Web Server na AlmaLinux 8.
Apache, na ndabara, dị na iyi AlmaLinux 8 App. Nke a bara uru maka ọtụtụ ndị ọrụ n'ihi na ọ kwụsiri ike na nchekwa. Iji wụnye Apache, mepee ọdụ gị wee mebie iwu a:
Na-esote, site na ndabara Apache (HTTPD) na-abịa nwere nkwarụ na ọ naghị arụ ọrụ. Mbụ, malite ọrụ.
Nhọrọ, gbanye Apache na buut sistemụ.
Lelee ka ịhụ ma Apache2 na-agba ọsọ nke ọma site na iji ihe ndị a sistemụ iwu:
Ihe atụ mmepụta ma ọ bụrụ na ihe niile dị mma:
Ọ naghị etinye iwu ọkụ ọkụ ozugbo na ọdụ ụgbọ mmiri 80 ma ọ bụ 443 mgbe ị na-etinye Apache. Tupu ị gaa n'ihu, ịkwesịrị ịtọ iwu ndị a, nke a ga-adabere na ọdụ ụgbọ mmiri ị ga-eji, mana edepụtara nhọrọ niile.
Mepee ọdụ ụgbọ mmiri 80 ma ọ bụ HTTP:
Mepee ọdụ ụgbọ mmiri 443 ma ọ bụ HTTPS:
Bugharịa firewall iji mee mgbanwe ka ọ dị irè
Ugbu a ị wụnyela ma hazie ya, oge eruola ịnwale iji hụ ma Apache 2 nwere ike iru ma na-arụ ọrụ nke ọma site na ịrịọ ibe.
Ị nwere ike ịnweta ibe ọdịda Apache ndabara iji lelee ma ngwanro ahụ na-agba ọsọ nke ọma site na adreesị IP nke ihe nkesa gị. Iji chọpụta nke a, ọ bụrụ na ịmaghị, jiri iwu a dị n'okpuru:
Ị ga-eweghachite adreesị IP nke ime ihe nkesa dị ka ọmụmaatụ:
Ị nwere ike nweta nsonaazụ 2 ruo 3 azụ. Gbalịa nke ọ bụla ruo mgbe ịchọtara adreesị IP ziri ezi.
Ọ bụrụ na ịchọrọ adreesị IP ọha gị (mpụta), jiri iwu a kama:
Ị nwere ike ịwụnye ngwugwu CURL ma ọ bụrụ na ọ na-efu. Iji mee nke a, mebie iwu a:
Ozugbo ị nwere adreesị IP nke sava gị, mepee ihe nchọgharị ịntanetị kachasị amasị gị wee tinye ihe ndị a:
Ị ga-enweta ibe a na ihe nchọgharị ịntanetị gị:
Ekele, ị tinyela sava weebụ Apache 2 ma na-arụ ọrụ ugbu a.
Nzọụkwụ ọzọ bụ ịtọlite ​​​​virtual hosts.
Iji sava weebụ Apache, ị nwere ike ịmepụta ndị ọbịa mebere iji jikwaa nhazi maka ihe karịrị otu ngalaba na-agba ọsọ n'otu sava. Ọ bụrụ na i jirila Nginx mbụ, ọ bụ ihe mgbochi nkesa. N'ihe atụ dị n'okpuru, nkuzi ahụ ga-emepụta ngalaba example-domain.com nke ị ga-eji aha ngalaba gị dochie anya.
Nke mbụ, pụọ / var / www / html ndekọ na-emebibeghị dị ka ndekọ aha ndabara, wee mepụta ndekọ ọhụrụ, dịka ọmụmaatụ-domain.com, dị ka n'okpuru:
Nzọụkwụ na-esote bụ ikenye akwụkwọ ndekọ aha ya na mgbanwe gburugburu $USER:
Ọtụtụ mgbe, ikike mgbọrọgwụ webụ kwesịrị ịtọ ya nke ọma, ma ị nwere ike nyochaa site na iji -ls l iwu:
Dị ka ị pụrụ ịhụ, anyị nwere ikike nke drwxr-xr-x, nke ya na ya Ogbe 755. Ọ bụrụ na ịnweghị ntọala ikike a, mee iwu a:
Ugbu a mepụta ihe nlele ibe index.html site na iji ndezi ederede ọkacha mmasị gị. Nkuzi a ga-eji nano dị ka n'okpuru:
Na faịlụ, detuo na mado koodu a:
Ugbu a ị mepụtara ibe ọdịda wee tọọ ikike na ikike ziri ezi. Site na ndabara, a ga-emerịrị akwụkwọ ndekọ aha achọrọ wee hazie ya.
Nke mbụ, mee akwụkwọ ndekọ aha achọrọ maka saịtị-dị na saịtị na-enyere. Ndị ọrụ Nginx ga-amakwa ntọala a.
Nzọụkwụ ọzọ ị ga-eme bụ ịkụziri Apache ka ọ chọọ faịlụ nnabata mebere nke ga-adị mkpa ka ọ dị na ya /etc/httpd/sites-dị ndekọ.
Mepee faịlụ nhazi ahụ.
Tinye ihe ndị a na njedebe nke faịlụ ahụ.
Nhọrọ, ị nwere ike gbanyụọ ndabara nchekwa na Apache na-achọ mebere Host faịlụ nke nwere ike chọrọ izere mgbagwoju anya. Naanị tinye okwu n'akụkụ Gụnye conf.d/*.conf.conf.
Na-esote, jiri nchịkọta akụkọ ederede ọkacha mmasị gị ka ịmepụta faịlụ nhazi nhazi nke ọma dị na /etc/httpd/sites-available/example_domain.conf dị ka n'okpuru:
Ugbu a, detuo na mado ihe ndị a n'ime faịlụ ngọngọ nhazi, rịba ama iji dochie nke gị Aha nkesa, ServerAlias, na mgbọrọgwụ akwụkwọ na nke gị:
Mara, cheta echefula ịgbanwe ntuziaka nkesa nke achọrọ ka ọ bụrụ nke gị.
Iji chekwaa faịlụ nhazi ahụ (CTRL+O) wee pụọ na ya (CTRL+X).
Nzọụkwụ ọzọ bụ iji mee ka virtual host. Na mbụ, ị mepụtara akwụkwọ ndekọ aha abụọ, saịtị-dị na agbanyere saịtị. Ugbu a, ị ga-achọ ịmepụta a akara akara na nyeere saịtị iji mee ka onye nnabata mebere rụọ ọrụ.
Iji mepụta symlink, jiri ihe atụ na-esonụ na njedebe gị.
Ozugbo emechara, malitegharịa ọrụ Apache.
Mepee ihe nchọgharị ịntanetị gị wee pịnye na ngalaba aha gị HTTP://example_domain ebe ị ga-enweta ibe ọdịda ndị a ị mepụtara na faịlụ index.html:
Ekele, ị rụpụtala onye nnabata gị nke ọma wee mee ka ọ rụọ ọrụ nke ọma na ngalaba gị.
Dị ka o kwesịrị, ị ga-achọ ijikwa Apache gị HTTPS na-eji asambodo SSL. Ụzọ kacha mma isi mee nke a bụ iji Ka anyị zoo, ikike asambodo efu, akpaaka na mepere emepe nke ndị Otu nyocha nchekwa ịntanetị anaghị akwụ ụgwọ (ISRG).
Mbụ, wụnye EPEL ebe nchekwa na mod_ssl ngwugwu maka ngwungwu emelitere nke ọma na nchekwa.
Na-esote, wụnye ngwugwu certbot dị ka ndị a:
Ozugbo arụnyere, gbanye iwu a ka ịmalite imepụta asambodo gị:
Nke a bụ ezigbo ntọala nke gụnyere ike HTTPS 301 redirects, Strict-Transport-Security nkụnye eji isi mee, na OCSP Stapling. Naanị jide n'aka na ịhazigharịa e-mail na ngalaba aha na ihe ị chọrọ.
Ugbu a URL gị ga-abụ https://www.example.com kama HTTP://www.example.com.
Rịba ama, ọ bụrụ na ị na-eji nke ochie URL HTTP, ọ ga-akpaghị aka redirect gaa na HTTPS.
Nhọrọ, ị nwere ike ịtọ ọrụ cron iji megharịa asambodo na-akpaghị aka. Certbot na-enye edemede nke na-eme nke a na-akpaghị aka, ma ị nwere ike ibu ụzọ nwalee iji jide n'aka na ihe niile na-arụ ọrụ site na ịme ọkụ ọkụ.
Ọ bụrụ na ihe niile na-arụ ọrụ, mepee windo crontab gị site na iji iwu njedebe na-esote.
Na-esote, kọwaa oge mgbe ọ ga-emeghari onwe ya. Ekwesịrị ịlele nke a kwa ụbọchị na opekempe, ma ọ bụrụ na achọrọ ka emegharịa asambodo ahụ, edemede ahụ agaghị emelite asambodo ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ enyemaka na ịchọta ezigbo oge ịtọ, jiri ya crontab.guru ngwá ọrụ efu.
Save (CTRL+O) wee pụọ (CTRL+X), na cronjob ga-enyere aka na-akpaghị aka.
Ugbu a ị nwere Apache na-agba ọsọ na sava gị nke ọma, ụfọdụ igodo njikwa bụ ndị a.
Enwere ike ịhụ ndekọ ihe nkesa Apache na ndekọ var/www/example_domain na omenala.log na mperi.log nkwanye ùgwù ịbụ ndabara ohere na njehie aha nyere. Enwere ike ịgbanwe nke a ka ọ bụrụ aha ndị ọzọ na faịlụ nhazi nhazi nnabata gị n'ọdịnihu.
Iwu ndị a nke ị ga-eji na njikwa kwa ụbọchị mgbe ị na-arụ ọrụ na Apache. Ụfọdụ n'ime ihe a na-ahụkarị bụ:
Iji kwụsị sava weebụ Apache:
Ka ịmalite sava weebụ Apache:
Ka ịmalitegharịa sava weebụ Apache:
Ka ibugharị sava weebụ Apache (Maka obere mgbanwe ndị ọzọ anaghị achọ ịmalitegharị):
Iji gbanyụọ Apache na buut nkesa:
Ka ịmalite Apache na buut nkesa (Agbanyere na akpaghị aka na nwụnye):
Ka imelite Apache n'ọdịniihu, a na-eme nke a site n'iwu ị jiri lelee ma sistemụ gị emechiela. Mara, mepụta ndabere ma ọ bụ onyonyo mgbe niile ma ọ bụrụ na ị nwere ọrụ Apache na-arụ ọrụ dị egwu. Ọtụtụ mgbe, ọ dị mma ịkwalite, mana mgbe ụfọdụ ahụhụ nwere ike ime dị ka nkwalite ngwanrọ ọ bụla.
Ka imelite Apache, jiri iwu a:
Ọ bụrụ na nkwalite Apache dị, jiri iwu a:
Iji wepụ Apache ma ọ bụrụ na ị naghịzi eji ya, enwere ike ime nke a site na iji iwu a:
Iwu a ga-ewepụkwa ndabere ọ bụla na-ejighị ya nke bịara na nrụnye.
N'ime nkuzi, ị mụtala otu esi etinye Apache (httpd) na AlmaLinux 8. N'ozuzu, Apache bụ ihe nkesa ngwa weebụ kachasị eji na ụwa ruo ọtụtụ iri afọ. Agbanyeghị, Nginx emechaala n'isi ntakịrị ntakịrị. Apache ka bụ otu n'ime ngwa weebụ a na-ebugharị na ama ama, ọkachasị yana ijikọ nchịkọta LAMP, nke a na-ejikarị maka sava weebụ azụ azụ. Ị ga-achọta nhọrọ enyi na enyi maka Apache karịa Nginx, na-eduga ndị ọrụ ọhụrụ ịbanye na sava weebụ ha, ikekwe ịnwale Apache n'elu Nginx dị ka nzọụkwụ mbụ.
Categories AlmaLinux Tags AlmaLinux 8, Apache Mail igodo